Amaski, iLederhosen, nobhiya ok kuzindiza ezintsha ze-Air Canada Toronto kuya eMunich
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Airlines » Amaski, iLederhosen, nobhiya ok kuzindiza ezintsha ze-Air Canada Toronto kuya eMunich
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • ICanada Breaking News • Izindaba zaseJalimane • Izindaba • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Ezokuvakasha • Transportation • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • Izindaba Ezihlukahlukene
Abantu baseBavaria bazovunyelwa ukugibela indiza ezayo ye-Air Canada 77-9 Dreamliner kuwo wonke amakilasi ama-3 egqoke iLederhosen noma iDirndl.
I-Lederhosen yayenziwe futhi ngokwesiko yenziwe ngezinto zesikhumba, okwenza kube lula ukuyihlanza nokususa ukungcola nothuli, ngemuva komsebenzi onzima wosuku. I-Lederhosen, ngakho-ke, ngokuvamile yayiyizembatho zabasebenzi ezaziphethe izincazelo ezithile zamasiko nezenhlalo kumasiko nasemazweni akhuluma isiJalimane. Ziyimfashini eBavaria, ziphakamisa amashiya kulo lonke elaseJalimane, kepha kufanele zibhekwe njengezihlukile e-Ontario noma kulo lonke elaseCanada.
Ngemuva kwesimemezelo sikaHulumeni waseCanada sokuvula kabusha imingcele yamazwe omhlaba ngoSepthemba 7, i-Air Canada iveze imininingwane eyengeziwe
yesheduli yendiza yayo ehlelwe iMunich (MUC) - eToronto (YYZ).
Ukukhululwa kwemikhawulo kunika amandla abantu bakwamanye amazwe abagonywe ngokuphelele ngemithi yokugoma eyamukelwa nguHulumeni waseCanada (Moderna, Pfizer, AstraZeneca, kanye ne-J & J) okungenani ezinsukwini eziyi-14 ngaphambili futhi abahlangabezana nezidingo ezithile zokungena eCanada ngohambo olungadingekile.
IJalimane nayo ivumela abantu baseCanada abagonywe ngokuphelele noma labo abakwazi ukukhombisa ukuhlolwa kwe-COVID okungekho emthethweni ukungena eJalimane nasendaweni yaseSchengen.
Ukugqoka iLederhosen yamanenekazi kanye neDirndl yamantombazane lapho ehamba ngendiza engapheli esuka eBavaria Capital City yaseMunich eya eToronto kuzokwenzeka ngaphandle kokuphakamisa amashiya amaJalimane kwamanye amadolobha angaphandle kweBavaria njengeFrankfurt.
Abantu abaningi e-Ontario, eCanada, bathanda i-Octoberfest futhi babheka amaJalimane egqoke ama-dirndls, i-lederhosen, nezigqoko zaseJalimane, ezithathwa njengezingubo zendabuko zase-German Bavarian Octoberfest.
ILufthansa ibilokhu ixhumanisa iGermany neCanada nezindiza ezingami, futhi ukwengezwa kozakwethu beStar Alliance i-Air Canada ukuvula kabusha umzila wayo osuka eMunich ungapheli uya eToronto kuzongeza kule ndawo ebalulekile yezokungcebeleka namabhizinisi.
IMunich, iFrankfurt, nezinye izikhumulo zezindiza zaseYurophu ezinjengeVienna, iZurich, iAmsterdam, iBrussels, neParis zixhuma eCanada ngezindiza eziqondile nezikodwa.
Izindiza nezikhumulo zezindiza kanye nemifelandawonye eyahlukahlukene incintisana kulo makethe. Ngaphezu kwalokho, abathwali abashibhile nabashaqashi abanjengoCondor basebenzela imakethe yaseCanada yaseCanada evela ezikhumulweni zezindiza ezahlukahlukene eJalimane nakwamanye amazwe angomakhelwane.
Isikhumulo sezindiza esiyinhloko eJalimane sisazoba njalo IFRAPORT (eFrankfurt), kodwa iMunich eSouthern Europe State of Bavaria iyindawo yesibili ebaluleke kakhulu ukuxhuma iJalimane nezwe
Cishe zonke izikhumulo zezindiza ezinkulu zixhunywe nohlelo lwe-ICE Train, luvumela ukuxhuma amadolobha amakhulu nezikhumulo zezindiza zaseJalimane kungakapheli amahora nesivinini esedlula ama-200 km / h.
“Njengoba imikhawulo yezokuvakasha yehla emhlabeni wonke, sizibophezele ekwakheni kabusha inethiwekhi yethu yamazwe omhlaba futhi siqhubeke njengabathwali bomhlaba abaxhumanisa umhlaba neCanada. Njengoba abaseYurophu bezimisele ukuphinde babuyele eCanada, sikulungele ukuhlanganisa amakhasimende nemindeni yawo kanye nabangane, ”kusho uJen-Christophe Hérault, oyiRegional Manager Manager eJalimane, eSwitzerland, e-Austria naseMpumalanga Yurophu e-Air Canada.
Njengazo zonke izindiza, kulezi zinsuku injabulo yesikhumulo sezindiza i-Air Canada neMunich Airport isuselwa esimweni sanamuhla.
Ngakho-ke, i-Air Canada yanezela ekukhishweni kwayo kwabezindaba: “Qaphela ukuthi uhlelo lwezohwebo lwe-Air Canada lungalungiswa njengoba kudingeka ngokuya ngemikhawulo ye-COVID-19 kanye nemikhawulo kahulumeni. Abagibeli banesibopho sokuqinisekisa ukuthi bahlangana nabo bonke
izidingo zikahulumeni zokungena, kufaka phakathi ukuphatha izincwadi ezifanele zokuhamba, ama-visa, noma yiziphi izitifiketi zezempilo ezidingekayo, nazo zonke ezinye izidingo zokufaneleka kunoma yiziphi izindiza abazithengayo. Ngemininingwane yamanje, sicela uvakashele ihabhu lethu lemininingwane noma iwebhusayithi ye-IATA's Timatic. Inqubomgomo Yezokuvakasha: Bhuka ngokuzethemba.
Izidingo zikahulumeni zingashintsha ngaphandle kwesaziso esincane
Ukulahleka kwemboni yezindiza kuye ngaphezulu kwama- $ 200 billion ngo-2020 ...
I-SATW Foundation imemezela abawine u-2021 bakaLowell ...
Ukusebenza njengesigqila iminyaka engama-20? Uxoshiwe!
Izihambeli ze-IMEX zaseMelika Zenza Umjaho Wokuphila kahle
I-African Princes of Comedy Tour ihambela idolobha...
Ngabe abacebile kuphela abazokwazi ukukhokhela amaholide e...
Amasekisi aseNyakatho ye-Ireland aphelelwa amahlaya
ICanada yenza ukugonywa kuphoqeleke ...
Thola umsebenzi: IDenmark itshela abokufika ukuthi basebenzele inhlalakahle ...
Uhlelo Olusha Lomhlaba Wonke Lweshumi Leminyaka Lokusebenza Lokuphepha Emgwaqeni
IFraport AG ibeka ngempumelelo inothi lesethembiso
Aha: Inkampani Yezindiza entsha ye-Nevada ezinze e-Reno - Tahoe
I-Delhi Ibheke Ebangeni Elincishisiwe Lamahhotela Ezinkanyezi Ezi-5
I-JA Solar ihlinzeka ngogesi oluhlaza emidlalweni ezayo...
AbakwaBrits Babuyile! Izindiza Eziyi-16 Ngeviki Manje Phakathi Kwe-UK...
I-Pandaw Cruises Manje Ivalwe Ngebhizinisi Ngokuhle Ngenxa...
Umkhosi weCarolina Cup udonsela ku-Top Paddle Surfers
EJalimane: Iminyaka emibili ejele ngomgomo mbumbulu we-COVID-19 ...
Kumnandi manje ePhilippines ku ...
Ukuzamazama komhlaba kweStrong Magnitude 6.1 kugadla endaweni yaseTokyo, akukho ...
Umhlahlandlela wakho osheshayo wokuHlela i-Getaway eGeorgia ...
UMkhandlu Ophethe we-UNWTO Uyacacisa: Incwadi entsha...
Mayday, Mayday ngawo wonke amaSenenja nabameleli baseMelika...
Incwadi entsha ye-UNWTO Eya Emazweni Angamalungu ayo:...
I-YouTube yandisa ukuvinjelwa kwayo KONKE okuqukethwe komuthi wokugoma
I-Crossing Yethula Indawo Enamandla Esikhashana ...
I-Apple imisa konke ukuthengiswa okusha kweTurkey njengemali yaseTurkey ...
IMozambique, iNingizimu Afrika, iCape Verde, iMorocco, iZambia ...
UMkhandlu Wongqongqoshe Wase-Italy Ugunyaze Izinyathelo Zokukhuphula...
Izindawo ezi-4 kwezingu-5 zamabhishi omhlaba ezihamba phambili zise-US
I-Australia ivula kabusha iNingizimu egonywe ngokugcwele...
Ukuqhuma Kwentaba-mlilo YaseHawaii Kwakha Umoya Ongahle Wibe Mncane ...
Izivakashi zaseNdiya zizofunwa kakhulu
Izinselelo ezibalulekile zezokuvakasha zaseYurophu zivezwe e ...
Usohlwini lwabaphambili: I-China isongela i-Taiwan...